घरेलु बजेटको मुल मर्म र नारा : लभ गर, माया गर तर खर्च नगर ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
जेठ १७, २०७७ शनिबार ८:४३:२ | मिलन तिमिल्सिना
कोरोनाले खुम्चिएका ......मुखज्यू, काम न काज स्वकीयका नामको तलवनास .....ध्यक्षज्यू, लकडाउनले स्कुल जान नपर्दा खेलेरै मस्तीमा दिन बिताइरहेका .....धान तथा .... मान मन्त्रीज्यू, तथा ...... नीय भुराभुरीज्यूहरु ! यहाँहरुमध्ये धेरैको मुखमा रंगीबिरंगी मास्क रहेछ ।
कोरोनाबाट बच्न हो वा लाजले देखाउन नहुने भैसकेको मुख छोप्न मास्क लगाउनु भएका हो, बुझ्न सकिएन । मास्क लगाउने कारण बुझ्न नसक्ने यो मनुवाले यहाँहरुको अनुहार चिन्ने त झन् कुरै भएन ।
कोरोनाले रुन परेको र लकडाउनले लक नै डाउन भएको यो अवस्थामा घर चलाउन डर बढेको कुरा त यहाँहरु सबैलाई पत्तो छँदैछ । कोरोनाले रुन कर लगाइरहेको यो बेला मकैमा फौजी किरो पस्यो । यो किरोले कृषिको हालत जिरो बनाउला जस्तो छ । सलहले चाहिँ कलह बढाउने निश्चितै छ ।
कोरोना, फौजी किरा र सलहले चारैतिरबाट घेरेको अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा आउँदो वर्ष आफ्नै घरको बजेटमा व्यापक कटौती गर्न अबेला भैसकेको छ । हिजोआज आकाशमा जेट त देख्न पाईंदैन भने घरमा बजेट देखिने कुरो पनि भएन । त्यसैले अब म आउँदो आर्थिक वर्षको लागि विभिन्न शीर्षकमा नदेखिने बजेट प्रस्तुत गर्न गैरहेको छु ।
सबैका मुखले आँ गरिरहे पनि आम्दानीको मुख बन्द भएकाले खानाखाजामा खर्च हुने बजेटलाई व्यापक कटौती गरिएको छ । भोक लाग्नेबित्तिकै खाइहाल्ने अहिलेसम्मको बानीलाई नियन्त्रण गरिनेछ । दिउँसोको खाजालाई पूर्ण रुपमा कटौती मात्र गरेर नपुग्ने देखेर खारेज नै गरिएको छ ।
बिहान र बेलुकाको भात तिउनको मात्रा केही कटौती गरिएको छ । समृध्द नेपालमा खान नपाएर कोही मर्नु पर्दैन भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन परिवारमा कसैलाई भोकै लाग्न नदिने र लागे देखाउन नपाईने रणनीति कडाईका साथ लागू गरिनेछ ।
अहिले टन्न खाएर मोटाउने र पछि व्यायाम गरी ज्यान घटाउने कुरा बिर्साउने रणनीति अन्तर्गत अबका केही दिनदेखि सकेसम्म आधी पेट खाने, बायुविकारले आधा पेट खान नसके त्यसको पनि आधा पेट खाने, सातामा केही दिन अनिवार्य उपवास बस्ने बानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
भरी पेट खान माग गर्नेलाई गाउँमा बाँझो जमिन खन्न पठाइनेछ । आफूलाई खान पुग्ने आफैं फलाउन बाध्य पारिनेछ । भाइरसबाट ज्यान जोगियो, फौजी किरा र सलहबाट अन्न जोगियो भने मुलुकका लागि यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ भन्ने तथ्य बुझाउन प्रयास गरिनेछ ।
तिज, दशैं, तिहार र अरु बेला पनि आक्कलझुक्कल लुगा किन्ने प्रवृत्तिलाई आउँदो वर्ष पूर्ण रुपमा बन्देज गरिनेछ । अहिलेसम्म घरबाहिर निस्कन नपरेकाले एकजोर लुगाले धानिरहेको र बाँकी लुगा लगाउनै बाँकी भएकाले ती बाँकी लुगालाई धोईपखाली नयाँ बनाइनेछ ।
नयाँ लुगाको झल्को दिन आवश्यकता अनुसार स्टिकर टाँस्न र आइरन लगाउन सकिनेछ । यसरी पुराना लुगालाई धोई पखाली प्रयोग गर्नेलाई एक छाक खाजा उपहार समेत दिईनेछ ।
सरकारकै कारण शिक्षामा बजेट छुट्याउन नपरेको दुई महिना भयो । वर्तमान अवस्थाले निरन्तरता पाइरहोस् भन्ने चाहना सहित कामना पनि गरिएको छ । स्कुल नखुलेकाले केटाकेटीलाई नयाँ ड्रेसदेखि कापी कलम किन्न नपरेकोले केही राहत मिलेको अनुभूत गर्दै यसका लागि दुई तिहाई नजिकको सरकारलाई धन्यवाद दिंदै आराध्यदेव पशुपतिनाथको मन्दिर र स्कुल वर्षभरि नै नखुल्ने मंगल कामना गरिएको छ ।
स्कुल जान नपरेपछि अहिलेसम्म मोबाइल र टेलिभिजनमा भुलिरहेका केटाकेटीले समेत बिस्तारै खेतीपातीको काम सिक्नेछन् । यसैबाट आत्मनिर्भर हुने अपेक्षा गरिएको छ । ‘पढेर पो के हुन्छ र’ भन्ने मान्यतालाई यथार्थमै बदल्न सकभर प्रयास गरिनेछ । आउँदो वर्ष एउटा सिसाकलम र एउटा कापीको लागि मात्र निश्चित बजेट छुट्याइएको छ ।
सरकारको ध्यान कोरोनामा मात्र केन्द्रित भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै रुघाखोकी, ज्वरो, झाडापखालाजस्ता मौसमी बिमारदेखि ग्यास्टिक, प्रेसर, सुगर जस्ता सबै राष्ट्रिय रोगलाई कोरोनामा परिणत गरिनेछ । कोरोना लाग्यो भने सरकारले हेर्छ, अरु रोग लाग्यो भने हेर्दैन । त्यसैले अरु रोग लाग्दा पनि कोरोना नै हो भनेर पुष्टि गरिनेछ । स्वास्थ्यको लागि बजेट अपुग हुने भएकाले सकेसम्म रोगै लाग्न नदिने, कथंकदाचित लागिहाले कोरोना नै हो भनेर पुष्टि गर्ने नीति लिइनेछ ।
सार्वजनिक गाडी चल्ने ठेगान अझै नभएकाले गाडी भाडावापतको रकम कटौती गरिएको छ । घरमा थन्काएर राखेको मोटरसाइकल र साइकल बेच्न र पैदल हिँडेर स्वास्थलाभ लिने बानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
चाडपर्व, काजकर्म :
तिज, दशैँ तिहार र छठसम्मै कोरोनाको डर कायमै रहोस् भन्ने कामना छ । कामना पूरा भएन भने, सबै सदस्यलाई चाडपर्व मनाउन नपर्ने यथासमय जानकारी गराइनेछ । ब्रतबन्ध गर्ने उमेर पुगेका केटाहरुलाई एकैपटक बिहे गराउने र बिहे गर्ने उमेर भएकालाई आफूखुशी सुटुक्क भाग्न प्रोत्साहन गरिएको छ । भागी विवाहलाई उच्च महत्व दिइनेछ, मागी विवाहका हकमा होमा हो मिलाउने गरी टाउको हल्लाईनेछ ।
जन्ती जाने, भोज खाने सबै विधि हटाइएका छन् । छोराछोरीको लभ परेको थाहा पाए पनि अब गाली गरिनेछैन । सुटुक्क भागे वा भगाएर ल्याए स्वागत गरिनेछ । “लभ गर, माया गर तर खर्च नगर” भन्ने नारालाई साकार पार्ने हरेक युवालाई प्रोत्साहित गर्न लकडाउन खुलेपछि एउटा स्मार्ट मोबाइल पुरस्कार दिईनेछ ।
मनोरञ्जन र फजुल खर्च :
सिनेमाघर लगायतका सबै मनोरञ्जनस्थल सधैंका लागि बन्द होउन् भन्ने कामना गरिएको छ । कामना पूरा नभै खुलेमा पनि आउँदो वर्ष घरका सबै सदस्यलाई सिनेमा घर लगायतका मनोरञ्जनस्थल जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
मनोरञ्जन गर्न मन हुनेबित्तिकै घरमा सबैको भेला गराएर अन्ताक्षरी, दोहोरी, नाचगान, चुट्किला लगायतका कार्यक्रम गरिनेछ । पिकनिक र घुमफिरमा पूर्ण रोक लगाइएको छ । वर्षमा एक, दुईपटक मासु खान सकियो भने त्यसैलाई पिकनिक मानिनेछ । अहिलेसम्म पाइला नराखेको आफ्नै खेतबारीसम्म जाने कामलाई घुमफिर भनिनेछ । फोकटमा हुने सबै किसिमका पकेट खर्चमा पूर्ण कटौती गरिएको छ ।
लकडाउन खुले पनि सैलुन र ब्युटीपार्लर जान लागेको प्रतिबन्ध हटाइने छैन । लकडाउनको ठूलो उपलब्धि घरघरमै कपाल काट्ने सीप भएको जनशक्ति उत्पादन हुनु हो । यस जनशक्तिलाई जीवनभर कपाल काट्न प्रेरित गरिनेछ ।
ब्युटीपार्लर नजाँदा पनि ब्युटी नै छु भन्ने भ्रम र भावना उत्पन्न गराउने विज्ञापनहरु बनाउने युवायुवतीको भर्चुअल सीप तिखारिनेछ । यसबाट देशले निर्यात गर्न सक्ने भ्रमित सुन्दरीहरुको संख्या र सुन्दरताको भ्रम पैदा गर्न सक्ने दक्ष भर्चुअल जनशक्ति एकसाथ तयार भई अर्को वर्ष सोधनान्तर घाटा पूरा हुनेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।
अन्तमा, यति धेरै प्रयास गर्दा गर्दै पनि न्यूनतम आवश्यकता पूरा नभए छरछिमेकीसँग ऋण सापट गरी अपुग रकम परिपूर्तिको प्रयत्न गरिनेछ । छरछिमेकीको हालत पनि आफ्नो जस्तै भएकाले कसैगरी पनि ऋण पाउन सकिएन र कोरोना, सलह तथा फौजी किरालाई छल्न सकेर हलचल गर्न र चल्न चटपटाउन नसक्ने अवस्था आयो भने नारी उठाएर जुलुस निकाल्ने अन्तिम अधिकारको प्रयोग गरिनेछ । हुने हुनामी पर्दै जाला, ब्यहोर्दै जाउँला !
त्यसपछि कि चपरीमुनिको बास, कि हस्तिनापुरको राज ! अहिलेलाई घरेलु अर्थमन्त्रीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद !
May 30, 2020, 2:57 p.m.
एकदम सही ब्यथा सबै नेपालीको .....